Kutheni uMartin Gavenda? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Ukulandela iTurzovka (1958-1962) kunye neLitmanova (1990-1995), ilali yaseDechtice yindawo yesithathu yokubonakala eSlovakia, apho iziganeko ezingachazwanga ngokwesayensi zaqala ngoDisemba 4, 1994. Endleleni egodukayo ukusuka kwiCawa leMisa, abantwana abane Ukuthetha ngokuya kuthandaza umnqamlezo wasekhaya eDobra Voda xa omnye wabo wabona ilanga lijikeleza kwaye litshintsha umbala. Bebona ukuba lo ingangumqondiso, abantwana baqala ukuthandaza iRosari. UMartin Gavenda - ngubani oza kuba ngumboni oyintloko weembonakalo - wabona ukukhanya okumhlophe kunye nomntu obhinqileyo owathi wayefuna ukumsebenzisa kwizicwangciso zikaThixo. Ekubonakaleni komfazi olandelayo, abantwana bafefa lo mfanekiso ungaqondakaliyo ngamanzi asikelelweyo, becinga ukuba isenokuba yidemon, kodwa lo mfazi akazange anyamalale. Izibhengezo zaqhubeka eDobra Voda, emva koko eDechtice, apho abanye abantwana nabo baqala ukufumana imiyalezo. Nge-15 ka-Agasti ka-1995, umfazi wazichaza njengoMariya, uKumkanikazi woNcedo.
Imixholo ephambili yemiyalezo evela eDechtice, eqhubeka unanamhla, ngokufanayo iyafana naleyo ifunyenwe kwezinye iisayithi ezibonakalayo ezibonakalayo kumashumi eminyaka akutshanje. Babonisa inzame zikaSathana zokutshabalalisa iBandla kunye nehlabathi liphela kunye nonyango olunikezwe yiZulu: iisakramente, iRosari, ukuzila ukutya kunye nokuhlawulwa kwamatyala awenziwe kwiintliziyo zikaYesu noMariya, indawo yokubalekela kunye "netyeya" yabanyanisekileyo amaxesha.
Imiyalezo evela kuMartin Gavenda
UMartin - Thandazela abefundisi
...abathotyiweyo, abacinezelweyo nabatshutshiswayo.
UMartin - Intshabalalo enkulu iqale
Ngumzabalazo wokugqibela wokholo lwenene lwamaKatolika.
UMartin - iintliziyo ezimbini ezibuhlungu
... kuba akukho nguquko yaneleyo.
UMartin - Izibophelelo zobukhoboka
Balekela kukhuseleko lwam ngokuzithemba nangakumbi.
UMartin - UMoya oyiNgcwele uya kugubungela iintsapho
Balekela kukhuseleko lwam olunamandla.
← Kutheni uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta?
Kutheni uGisella Cardia? →